Maitiro ekuisa Dropbox pane chero GNU / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Izwi rekuti Dropbox rave riripo mune edu software zvivakwa kwemakore. Asi Chii chinonzi dropbox chaizvo? Dropbox akaberekwa muna 2007 se gore rekuchengetedza sevhisi. Imwezve sevhisi mukati mezvakatove zvakawanda sarudzo dzaivepo.
Asi kusiyana nemamwe masevhisi, Dropbox yaive yekutanga sevhisi yekupa 2Gb yenzvimbo yekuchengetera yemahara uye yehupenyu. Uku kupihwa kwaive kwechokwadi chimurenga chakaita kuti vazhinji vaedze uye vazive iri gore rekuchengetedza sevhisi. Asi Dropbox yakaenderera mberi.
Kuwedzera kune yemahara nzvimbo yekupihwa, Dropbox yakapa basa rakanaka kwazvo iro masevhisi mazhinji achiri asina kukwanisa kurova. Kune rimwe divi, Dropbox yaienderana neakakura matatu masisitimu anoshanda, ndokuti, Windows, macOS uye GNU / Linux. Uye zvakare, Dropbox yaive nechikumbiro chakabatanidzwa neyemaneja maneja yeimwe neimwe sisitimu yekushandisa uye izvo zvinotibvumidza kuyananisa maforodha nemafaira pakati pevashandisi nezvikwata zvine Dropbox.
Mhedzisiro yeizvi zvese mukana wekuve nekuwana mafaera usinga tsamira pane wega server, uchifanira kutakura zvinyoreso zvinotyaira kana zvichienderana neDVD dhiraivha.
Asi kubudirira kweDropbox kwanga kusiri nekuda kweizvi chete asi nemushandirapamwe wayo mukuru wekushambadzira, mushandirapamwe waisanganisira kuzivisa kukuru kana kuhaya mukurumbira kuti ataure nezveDropbox asi mune izvo. ivo vakapa mazana 250 mb kushamwari yega yega yakagadzira account yekudonha kuburikidza newe. Izvi zvaireva kune rumwe rutivi kuti vashandisi vaive neinopfuura 2 Gb yenzvimbo yemahara uye kune rimwe divi kuti kwaive nevazhinji uye vazhinji vashandisi veiyi sevhisi.
1 Ndingaite sei kuti ndiwane mahara Dropbox?
2 Maitiro ekuisa Dropbox paGNU / Linux?
3 Chengetedzo uye matipi ekubata mafaera neDropbox
4 Dzimwe nzira kuDropbox
Ndingaite sei kuti ndiwane mahara Dropbox?
Pave nemakore akati wandei kubvira zvese izvo asi Dropbox yakaenderera nekuzvichengeta, chimwe chinhu chakashanda kuti chive chakaitirwa sevhisi ichiri kuzotarisirwa. Kuti uwane Dropbox mahara, kutanga isu tinofanirwa kuwana yemahara Dropbox account. Izvi zvakakosha sezvo pasina Dropbox app ichashanda pasina iyo. Saka tinoenda ku iyo yepamutemo webhusaiti yeiyo chaiyo hard disk uye zadza nzvimbo dziri pazasi pe "kusaina kumusoro" bhatani kuti ugadzire nyowani Dropbox account.
Chinongedzo chichatumirwa kwatiri kusimbisa kunyoreswa uye isu tinokwanisa kupinda mukati kune iyo yepamutemo Dropbox peji. Kana isu tatanga Dropbox kekutanga nguva isu tichava ne wizard yekubata iyo Dropbox webhu application uye mamwe emuenzaniso mafaira kuti aone mashandiro ayo.
Iye zvino zvatave nehara reDropbox account, isu tinofanirwa kuwana yemahara Dropbox application yatinozoisa pane yedu GNU / Linux kugovera. Dropbox inogoverwa pasi pepakeji mune dhi fomati kana mu rpm fomati. Haisati yashandiswa mune chero repository uye Parizvino haina kufungidzirwa kuti inosvika kune iyo snap kana flatpak fomati.
Chero zvazvingaitika, pane ino webhusaiti tinogona kuwana pasuru. Isu tinosarudza kugovera kwatinako, chikuva chatinoshandisa uye kurodha pasi.
Maitiro ekuisa Dropbox paGNU / Linux?
Isu tatova nechirongwa chepakeji, chirongwa ichi chinowanikwa mahara uye icho chatinofanirwa kuisa kuitira kuti yedu GNU / Linux system ishande nemabhodhi emabhodhi. Kuti tiite izvi tinofanirwa kuvhura terminal muDownloads folda uye nekuita unotevera kuraira kana pasuru yatinofanira kuisa iri mumhando yedhidhi:
Kana iyo package iyo isu tinofanirwa kuiisa mu rpm fomati, ipapo tinofanirwa kuita izvi:
Izvi zvichaisa chishandiso asi kwete zvese zvacho. Iye zvino tinofanirwa kuenda kumenu yekushandisa uye muchikamu cheInternet kumhanya iko kunyorera. Kuva kekutanga isu kumhanya nayo, Iyo wizard ichavhura iyo inokumbira iyo password uye zita rekushandisa reDropbox account.
Mushure mekuiisa, chirongwa ichi chichatanga kuwiriranisa zvishandiso zvedu nemafaira eaccount yedu, tichigadzira dura mumusha medu iro richadaidzwa kuti «Dropbox» uye nechiratidzo chemiseve chichava chebhuruu kudzamara kufananidza kwapera. Iko kunyorera kuchazowedzerwa kune iwo maapplication ayo akatakurwa pakutanga kwechikamu chedu chekugovera, kuitira kuti panguva yese chikamu, mafaera anogona kuwiriraniswa pasina matambudziko.
Chengetedzo uye matipi ekubata mafaera neDropbox
Kuisirwa uye kumisikidzwa kwechirongwa cheiyi chaiyo hard disk sevhisi iri nyore kwazvo, asi pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuziva kana tisingade kuva nematambudziko.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuziva ndechekuti iro rakaomarara hard disk rinoenderana mafaera asi hazviite makopi acho, izvi zvinoreva kuti kana tikabvisa gwaro pakombuta imwe, faira racho rinobviswa pamakomputa ese iro gwaro riripi. Icho chinhu chakakosha nekuti kana tikashandisa mafaera uye toshandisa iyo yakatemwa raira panzvimbo yekuteedzera, tinogona kuva nerimwe dambudziko. Iyo nzvimbo yatinayo pakutanga ndeye 2 Gb, asi iyo yekuchengetedza inogona kuwedzerwa nekubhadhara imwe yakati pamwedzi.
Applet yekushandisa ichatibatsirawo kugadzirisa mashandiro ebasa pakombuta yedu pamwe nekuziva kuti ndeapi mafaera akawiriraniswa uye kuti zvikamu zvipi zenzvimbo yatakatora. Chinhu chinonyanya kufadza nezve chekupedzisira ndechekuti isu tinogona kushandura iyo yekufananidza dhairekitori yeimwe dhata senge magwaro uye nekudaro tine sarudzo yekuchengetedza rese basa redu.
Dzimwe nzira kuDropbox
Dropbox yaive yechokwadi gore rekuchengetedza shanduko, asi haisiriyo mhinduro iripo izvozvi. Kana tikatarisa mashandiro uye mutengo weiyo chaiyo hard disk sevhisi, iyo yakanakisa imwe nzira kuDropbox ichave Google Drive, asi zvinosuruvarisa Dhiraivha haina yemuno application yeGNU / Linux. Chingave chinhu chakaipisisa nezveGoogle Drive.
Imwe yechipiri imwe nzira yakada kufanana neDropbox inonzi Mega, sevhisi yakazvarwa kubva kumugadziri weMegaupload uye yakatengwa nekambani yeChinese iyo yakatora chikumbiro uye neyekuchengetedza gore. Mega inotibvumidza kuyananisa mafaera pakati pemakomputa uye kunyangwe kugadzira ruzhinji kurodha ma link kuti upe kune vamwe. Mega ane chishandiso cheGNU / Linux, asi ichokwadi kuti haina kufarirwa kana kupa nzvimbo yakawanda yemahara semamwe masevhisi akaomarara edhisiki.
Mhinduro yechitatu kana imwe nzira ingave iyo rsync application uye yakavanzika server. Iyi ndiyo imwe nzira inogutsa pane chero rakaomarara dhisiki asi zvinoreva kushandisa kukuru kwenguva mukutanga kwayo, kunyangwe data redu richava mumaoko edu zvachose uye hatizobhadhare zvekuchengetedza.
Ini pachangu ndakaedza akawanda masevhisi ekuchengetedza masevhisi, asi ini ndinoda uye ndinoda Dropbox. Kubatanidzwa kwayo neGNU / Linux kunoshamisa uye kuri nani pane zvinopihwa neDrive kana Mega. Zvakare, ini handidi kushandisa nguva kumisikidza yangu yega server server, saka Dropbox inoita senge yakanyanya kunaka sarudzo.
Uye zvakare, pamwe neye mobile app, Dropbox inondibvumidza kuendesa mafaera kubva ku smartphone kuenda kune komputa pasina kudikanwa kwetambo. Asi sezvatakambotaura, Dropbox haisi yega sarudzo asi ini ndinokurudzira kuyedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Dropbox pane chero GNU / Linux kugovera
Mega haisi iyo inozivikanwa?
Iyo inopa 50 Gb yemahara, iri shoma pane mamwe masayiti?
Ini ndinobvuma zvachose !! 50Gb mahara !!
vhuraSUSE Tumbleweed yakagamuchira nyowani yekuchengetedzeka uye mapakeji